Kukho imiqondiso yokuchacha kwiihotele zeIntercontinental
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Kukho imiqondiso yokuchacha kwiihotele zeIntercontinental
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Oktobha 23, 2020
Emva kokukhutshwa kwanamhlanje Iqela leehotele zeIntercontinental (IHG) Uhlaziyo lwezorhwebo lwe-Q3 2020, iingcali zeshishini lokubuka iindwendwe ziqaphele ukuba unyaka nonyaka (YOY) ULAWULO lokwehla kwe-53.4% ​​kunye nenqanaba lokuhlala phantsi kwe-30% kunyaka ophelileyo bonisa ukuba i-Q3 inzima kangakanani kwi-IHG.
Kodwa ngaphandle koku, kukho isizathu sokuba nethemba njengoko ikhonkco lehotele linike ingxelo yokuba indawo yokuhlala iphuculwe ukusuka kwi-25% ukuya kwi-44% kwi-Q3, ibonakalisa ukukhanya ekupheleni kwetonela.
Ukuchacha kwe-IHG kuqhutywa kukhenketho lwasekhaya. Ngokwe-COVID-19 yoPhononongo lwaBasebenzisi boPhuculo (i-16-20 kaSeptemba), i-41% yabaphenduli kwihlabathi liphela banokuthathela ingqalelo ukubhukisha uhambo lwasekhaya kulo nyaka, xa kuthelekiswa ne-31% kuphela ethathela ingqalelo ukubhukisha uhambo lwamazwe aphesheya. Oku kubonisa imfuno enkulu yokhenketho lwasekhaya kwaye kunika ithemba lokuba imakethi yasekhaya iyakunceda iinkampani zehotele ukuba zihambe ngeli xesha linzima.
Imakethi yaseYurophu ibethwe kakhulu ngexesha le-Q3, kunye ne-RevPAR phantsi kwe-72% YOY, njengesixhobo sesibini secoronavirus esiqala ukubamba ilizwekazi liphela. Imakethi yaseTshayina ingabaluleka kwinkampani kwiinyanga ezizayo njengoko ilizwe libonisa ezona mpawu zibalulekileyo zokubuyiswa kwezokhenketho kwihlabathi liphela, eziqaqanjiswe ngumyinge wokuhlala wama-57%.
Iinyanga ezizayo ziya kuba ngumceli mngeni omkhulu kwi-IHG, nangona kunjalo, iimpawu zokuchacha kancinci ziqala ukubonakala.